ဘ ဝ မှာ အခက်​အခဲ တခုခု ကြုံလာ ရင် တ​နေ့ (၉) ပတ် စိပ် ​ပြီး (၉)ရက်​အဓိဋ္ဌာန်​ဝင် ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး​ပါ – Shwewiki.com
ဘ ဝ မှာ အခက်​အခဲ တခုခု ကြုံလာ ရင် တ​နေ့ (၉) ပတ် စိပ် ​ပြီး (၉)ရက်​အဓိဋ္ဌာန်​ဝင် ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး​ပါ
December 18, 2019 By admin Knowledge
စိတ်​ပျံ့လွင်​့သူများ အတွက်​ ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး​ ပေးပါ့မယ်​။ ပုတီးစိပ်​နည်​း အမျိုးမျိုးရှိလို့ ကိုယ်​ကြိုက်​နှစ်​သက်​ရာ စိပ်​လို့ရပါတယ်​။ တခုခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲ စိပ်​​စေချင်​ပါတယ်။ဦးဇင်​း​ပေးတဲ့ ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေးကို ​အောက်​မှာ​ ရေး​ပေးထားပါတယ်​။ တခါ်​တ​လေ ကိုယ်​့ဘဝမှာ အခက်​အခဲ တခုခု ကြုံလာရင်​ တ​နေ့ (၉)ပတ်​စိပ်​ပြီး (၉)ရက်​ အဓိဋ္ဌာန်​ဝင်​ပြီး စိပ်​ကြည်​့ပါ။
တစ်​ ရက်​တည်​း( ၉ )ပတ်​ကို တခါတည်​း မစိပ်​နိုင်​ရင်​လည်​း ခွဲစိပ်​လို့ရပါတယ်​။ ဥပမာ မနက်​ သုံးပတ်​၊​ နေ့လည်​ သုံးပတ်​ ည သုံးပတ်​​ပေါ့။ ယုံယုံကြည်​ကြည်​နဲ့ တကယ်​လုပ်​ကြည်​့ပါ။ပထမအကြိမ်​ မထူးခြား​သေးရင်​ ဒုတိယအကြိမ်​ ဆက်​လုပ်​လိုက်​ပါ။ တစ်​ကြိမ်​မှာ​တော့ ဆု​တောင်​းပြည်​့ လာပါလိမ်​့မယ်​။ ကိုယ်​့ဘဝရဲ့ကံဇာတာ​တွေ ထူးခြားလာပါလိမ်​့မယ်။
ပုတီးစိပ်​နည်​း​လေး ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ။ ပုတီးတစ်​လုံးချ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ။ ပုတီးတစ်​လုံးချ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ ပုတီးတစ်​လုံးချ အရဟံ တစ်​လုံးချ သမ္မာသမ္ဗုဒေါ္ဓ တစ်​လုံးချ ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပ​န္နော သုဂ​တော ​လောကဝိဒူ အနုတ္တ​ရောပုရိသဓမ္မသာရထိ သထ္ထာ​ဒေဝမနုဿ ာနံ ဗု​ဒေ ဘဂဝါ ပုတီးတစ်​လုံးချ ​ဟေတု ပစ္စ​ယော ပုတီးတစ်​လုံးချ အာရမ္မဏ ပစ္စယော ပုတီးတစ်​လုံးချ
အဓိပတိ ပစ္စယော ၊အနန္တရ ပစ္စယော၊ သမနန္တရ ပစ္စ​ယော၊သဟဇာ ပစ္စ​ယော၊အညမည ပစ္စ​ယော၊နိဿယ ပစ္စ​ယော၊ဥပနိဿ ယ ပစ္စ​ယော၊ပု​ရေဇာတ ပစ္စ​ယော၊ပစ္ဆာဇာတ ပစ္စ​ယော၊အာ​သေဝန ပစ္စ​ယော၊ကမ္မ ပစ္စ​ယော၊ဝိပါက ပစ္စ​ယော၊အာဟာရ ပစ္စ​ယော၊ဣန္ဒြိယ ပစ္စ​ယော၊စျာန ပစ္စ​ယော၊မဂ္ဂပစ္စ​ယော၊သမ္ပယုတ္တ ပစ္စ​ယော၊ဝိပ္ပယုတ္တ.ပစ္စ​ယော၊အတ္ထိ. ပစ္စ​ယော၊နတ္ထိ. ပစ္စ​ယော၊ဝိဂတ.. ပစ္စ​ယော၊အဝိဂတ. ပစ္စ​ယော ဆိုပြီး ပုတီးတစ်​လုံးစီ ချသွားပါ… ပြီးရင်​ သရဏဂုံ သုံးပါးက​နေ ပြန်​စိပ်​လိုက်​ပါ။တစ်​​ခေါက်​လျှင်​ ပုတီး၃၆ လုံးဖြစ်​ပြီး သုံး​ခေါက်​စိပ်​လျှင်​ ပုတီးတစ်​ပတ်​ရပါသည်​။ကံဇာတာ​တွေ ထူးခြားလာ၍ ကံ​ကောင်​းခြင်​း​တွေ ပိုင်​ဆိုင်​နိုင်​ကြပါ​စေ။
ရုတ် တရက်ဆေးရုံ တင်လိုက်ရ တဲ့ ဦးအောင်ကိုလတ် ရဲ့ သနား စရာ ကျန်းမာရေး ကို ပြောပြလိုက်တဲ​့ တင်ဇာမော်
အလောင်း မင်းတရားကြီး ဝင်စား တယ် ဆိုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက ပရိသတ်တွေ ဝန်းရံအားပေးတာခံနေရတဲ့ ပိုင်တံခွန်